सरकार प्रमुख हुँदा आमा बन्ने महिला प्रधानमन्त्री – doodhmati || dudhmati
Home / विश्व / सरकार प्रमुख हुँदा आमा बन्ने महिला प्रधानमन्त्री
सरकार प्रमुख हुँदा आमा बन्ने महिला प्रधानमन्त्री
Sujeet Jha January 26, 2018	विश्व 174 Views
न्युजरल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले आफू गर्भवती भएको खुलासा सामाजिक सञ्जालबाट गरेकी छिन्। सरकारको प्रमुख पदको जिम्मेवारीमा रहेकै समयमा आफू गर्भवती भएको खुलासा आर्डनले स्वयम् गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री आर्डनले आफ्नो बच्चा जन्मिएको समयको ६ हप्तासम्म उपप्रधानमन्त्री विन्सटन पिटर्सले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेसमेत बताएकी छिन्। आर्डन न्युजल्याण्डको इतिहासमा सन् १८५६ यताकै सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री हुन्। उनले ३७ वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माउन लागेको बिबिसीले जनाएको छ। आर्डन गत अक्टोबरमा मध्य वामपन्थी गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्।
उनले ६ हप्तापछि आफूले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा श्रीमानले घरमै बसेर सन्तान हेर्ने बताएकी छिन्। आर्डनले भनेकी छिन्, ‘हामीलाई सन् २०१७ महत्वपूर्ण वर्ष लाग्यो।’ आर्डनले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ६ दिनअघि मात्र गर्भवती भएको उल्लेख गर्दै गर्भवती भएको थाहा पाउँदा आफू अचम्मित भएको बताएकी छिन्।
विश्व इतिहासमा सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुँदा बच्चा जन्माउन लागेको यो रोचक समाचार हो। पाकिस्तानकी प्रधानमन्त्री स्वर्गीय बेनेजिर भुट्टोले सन् १९९० मा प्रधानमन्त्री हुँदा बच्चालाई जन्म दिएको इतिहास छ।
Tags न्युजरल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन
Previous धनुषाको जलाधी साझेदारी वनबाट घाइते फेला परेका अजिङ्गर सर्पको उद्धार, अहिले उपचार हुँदै ।। धनुषाधाममा अवलोकनका लागि राख्न सकिने
Next को बन्ला मुख्यमन्त्री ?
जब चकलेटको खोलो बग्दा सडक नै बन्द भयो
‘फेसबुकबाट प्रेम नगर्नुस् ’
पृथ्वीमा खस्दैछ चीनको स्पेस स्टेशन, तर कहाँ ?
एजेन्सी बेइजिंग, चैत १४ । चीनको ‘स्पेस स्टेशन’का अवशेष चाँडै पृथ्वीमा खस्ने बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् …
May 31, 2017	4,535
March 8, 2017	4,354